Andry Rajoelina : Tsy manana olona -
AccueilRaharaham-pirenenaAndry Rajoelina : Tsy manana olona
23/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Raha fihetsiketsehana ivelany dia hain’i Andry Rajoelina sy ny forongony tokoa, saingy rehefa tena dinihina lalina dia tsy manana olona ity “putschiste” ity. Porofon’izany, nitsangana ny governemanta Ntsay Christian, mbola ry Christine Razanamahasoa sy Augustin Andriamananoro ihany no azony naroso…
Miezaka manamboatra endrika sy mamahan-dalitra ny vahoaka hatrany ireo hainoamanjery mpomba ity mpanongam-panjakana ity, hilazana fa manara-dia azy avokoa ny hery velona sy ny mpanao politika matanjaka eto amin’ny firenena. Farany teo, navoakan’ny gazety La Vérité tamin’ny lohateny vaventiny ny filazana fa miaraka amin’i Andry Rajoelina avokoa ireo mpitarika politika matanjaka eto amin’ny firenena dia i Hajo Andrianainarivelo, Lalatiana Rakotondrazafy, Jean Louis Robinson ary Camille Vital.
Nilatsaka ho kandidà ben’ny tanànan’i Toliara Voalohany i Camille Vital ny volana Mey 2015. Tsy nahazo afa-tsy 18,8% ny tenany tamin’izany rehefa avy nandroaka 6,8% ny taona 2013, fifidianana filoham-pirenena. Tsy nanao afa-tsy ny nanangona faharesena i Camille Vital hatramin’izay niatrehany fifidianana. Voatery nandady tany amin’i Andry Rajoelina niditra mpikambana tao amin’ny ARMADA, ary azo antoka fa tsy hanana ho avy ara-politika mamiratra intsony mihitsy raha mbola fifidianana no horesahina.
Nanaraka ny dian’i Camille Vital koa anefa i Lalatiana Rakotondrazafy avy amin’ny antoko Freedom, nandritra ny fifidianana ben’ny tanànan’Antananarivo. Niondrika tanteraka teo anatrehan’i Lalao Ravalomanana tamin’ny isan-jato 31,5% ny tenany, ary tena “écrasée” mihitsy tany amin’ireo faritra iva nanompanany ny propagandiny. Ny fijoroan’i Andry Rajoelina teo anilany nandritra ny faradoboka teny Antsonjombe moa no anisan’ny fototr’izany fahareseny izany.
Mampiteny ny moana kosa indray no azo ilazana an’i Jean Louis Robinson. Kandidà filoham-pirenena natolotr’i Marc Ravalomanana niatrika ny fihodinana faharoa, nilaza hanendy « foza » dia izao miara-dia amin’i Andry Rajoelina izao. Tsy vitan’ny hoe tsy voaendiny fa lasa milelaka ny faladian’ireo notondroiny ho « foza » ankehitriny, ary zara raha lany ben’ny tanàna tany amina kaomina faran’izay kely tany Amparafaravola tany. I Hajo Andrianainarivelo indray moa dia mpanompo ary tsy afaka ny hahavita zavatra raha tsy misy an-dRajoelina. Niezaka nanangana ireny « Malagasy Miara-Miainga » ireny ny taona 2016 nikasa hametraka ny tenany ho lohan’ny mpanohitra teo anoloan’i Andry Rajoelina kanefa dia izao iaraha-mahita izao fa tsy nahavita nitàna ny teniny akory.
Fehiny, poakaty avokoa ireo mpanao politika manodidina an’i Andry Rajoelina, nambaran’ny gazety la Vérité fa “leaders politiques” ireo, manamafy ny voalaza tetsy ambony fa tsy manana olona izany MAPAR sy Andry Rajoelina izany. Fihetsiketsehana sy filalaovana saim-bahoaka daholo fotsiny no ataon’ireo hainoamanjery mpomba ireto mpanongam-panjakana ireto, ary hoporofoin’ny voka-pifidianana izany afaka telo volana.